तपाँइको कुरामा म पूर्ण सहमत छु ।
कृष्ण जी तपाईलाइ पनि ब्यस्ताले गांजे जस्तो छ। एकै लाइनमा कुरो टुंगाएर अलप हुनुभयो।
कि त बिषयको खडेरी परेको हुनुपर्छ कि त समयको। उत्तर मिल्यो कि मिलेन ;)
मेरै मनको कुरा पो लेख्नु भएछ । मलाई धेरै पटक यस्तै हुन्छ । फूर्सद नभएको पनि हैन, कहिले फूर्सद हुँदा दिमाग शुन्य हुने अनि कहिले कामको चापाचाप हुँदा भने 'यो लेखौं, त्यो लेखौं" भएर दिमागमा विषयहरुको बाढी आउने ।
अनि कहिले चाही तपाइले भन्नुभएजस्तै आधा-आधी लेखिसकेको कुरा पनि आफैलाई चित्त नबुझेर टाँस्न मन नलाग्ने। यस्तै हुने रहेछ ।
तर थाकेको भने हैन है !। अघील्लो हप्ता 'केही' लेखेको थीएँ समयमै पुरा गर्न नसक्दा अहिले त्यो विषय नै फिक्का भैसकेको छ र नयाँ, ताजा विषयको खोजीमा छु :)
ठरकी सरकहिले दिमाग सुन्य हुने, कहिले फूर्सद नहुने, अनि लेख्ने मूड चले बत्ती नहुने होला नी कसो?
लोडसेडिगंको चाड कतीको लाग्या छ?
चित्तबुझ्दो कुरा ।
सुरुमा त, लेख्‍नु नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यसपछि हो त्यसमा गुणस्तर आउने, खोज्नुपर्ने ।
मुड महिमाको कुरा अर्कै हुन्, लेखिरहने मान्छेले मुड त निकालि नै हाल्ला । तर बेफुर्सदी वा कामको चेपारोलाई मिचेर ब्लग लेखनमा रमाउन आउने थोरै होलान् । व्यावहारिक झमेलाले त्यो दिँदा पनि दिँदैन ।
फलस्वरूप तपाईँले उल्लेख गर्नुभए जस्तै 'फिलर' सामग्रीका रूपमा ब्लग ओगटिने र लेखकमा उही नाम दोहोरिरहने स्थिति आउँछ ।
अनि समस्याको अर्को पाटो मैले के देख्याछु भने, दौँतरी ब्लग लेखकमा सूचीबद्ध कतिपय ब्लगरको आफ्नो छुट्टै ब्लग छ । यसैले पनि लेखिइसकेका र लेखिन लागेका विषयवस्तुको समायोजन र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा सामूहिक ब्लग भईकन पनि 'दौँतरी' ओझेल परेको हुनसक्ला । मेरो हकमा भने आफू फाट्टफुट्ट रूपमा मात्र लेख्‍ने र पालैशान्ति ब्लगिङलाई बग्न दिने सोचमा छु ।
गतिला कलम भएका पाहुना लेखक खोज्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ त्यत्तिकै भइराख्या छ । त्यसो हुन सकेका तालमेल मिल्नेथ्यो । चुनौती छन्, पन्छाउँदै जानु त छँदैछ । पहिलो कुरा त, ठूलो अभियान चलाउने भन्दा पनि म आफ्नो तवरबाट के दिन सक्छु भन्नेमै टिकेको छु है म त । :)